धेरै थकाई लाग्ने ६ कारण - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार धेरै थकाई लाग्ने ६ कारण
स्वस्थ भोजन, व्यायाम र पर्याप्त निन्द्राले शरीरलाई उर्जा दिन्छ। तर कहिले काँही धेरै परिश्रम नगर्दा पनि शरीर कमजोर र थकाई भएको महशुस हुन्छ। कहिलेकाँही रोगका कारण थकाई महशुस हुनसक्छ। यसका साथै थकाई महशुस हुनुमा यी कारणहरु पनि हुनसक्छ:
१. प्रोटिनको मात्रा न्यून
खानामा प्रोेटिनको मात्रा थोरै भयो भने शरीर कमजोर हुनुका साथै थकाई महशुस हुन्छ। महिला र पुरुषलाई प्रोटिनको मात्रा फरक– फरक भए पनि तौल र शारीरिक गतिविधिमा प्रोटिनको मात्रा निर्भर हुन्छ। प्रोटिन माछा–मासु र गेडागुडीमा प्रशस्त पाइन्छ।
२. शाकाहारी भोजन
भिटामिन बी १२ ले शरीरलाई आवश्यक पर्ने मेटाबोलिजम र उर्जा प्रदान गर्छ। मासु र अन्डामा यो भिटामिन पाइन्छ। बी १२ को कमिले शरीर कमजोर र आलश्य हुन्छ। त्यसैले शाकाहारी मानिसले भिटामिन बी १२ पाइने अन्य खाना खानु पर्छ।
पर्याप्त पानी नपिउँदा पनि निकै अल्छी र कमजोर अनुभूति हुन्छ । मझौला खालको डिहाईड्रेसनले पनि उर्जाको तह, मुड, स्पष्ट सोच्ने क्षमतामा असर गर्छ। त्यसैले पानी पर्याप्त मात्रामा पिउनु पर्छ।
४. अत्यधिक सुत्नु
त्यसो त शरीरलाई आवश्यक उर्जाको लागि पर्यात सुत्न विज्ञहरुले सुझाब दिए पनि अत्यधिक बढी सुत्दा शरीर आलस्य र कमजोर महशुस हुन्छ। अत्यधिक सुत्दा शरिरमा साईड इफेक्ट पनि हुन्छ । बढी निन्द्राले डायबिटिज, मोटोपन, मुटुको रोग र मृत्यु समेत हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले दखाएका छन्।
५. पोटासको कमी
पोटास यस्तो खनिज हो जसले तपाईंको शरीरको कोषलाई पूर्ण रुपमा काम गर्न सहयोग पुर्‍याउछ। त्यस्तै पोटासले मांशपेशीलाई बलियो बनाउँछ। केरा, बेरी, एभोकाडो र गाँजरबाट पर्याप्त पोटास पाइन्छ।
६. डिप्रेशन र चिन्ता
डिप्रेशनले मानिसलाई मस्तिष्कदेखि नै कमजोर बनाउँछ। चिन्ताले हृदय र मुटुको चाल बढाउने र डिप्रेसनले मुड अस्थिर बनाउने भएकोले यस्ता रोगी शारीरिक र मानसिक रुपमा कमजोर हुन्छन्।
Previous articleसाउन एकदेखि ‘अवैध’ मोबाइल नचल्ने, मोबाइल उपहार पाउनेहरू त्रसित
Next articleअन्ततः फुट्ने भयो ‘जनता समाजवादी पार्टी’